निस्सन्देह कार्यात्मक मेसेन्जरको साथ उत्तम फेसबुक लाइट ग्राहक
भिडियो ट्यूटोरियल जुनमा म तपाईंलाई के भन्छु जुन आज मेरो लागि सब भन्दा राम्रो फेसबुक लाईट ग्राहक पूर्ण कार्यात्मक मेसेन्जरको साथ छ।
भिडियो ट्यूटोरियल जसमा म तपाईंलाई समान स्मार्टफोनमा दुई व्वाट्सएप बोक्न सिकाउछु पूर्णतया सि sy्क्रोनाइज गरिएको र तपाईंको एन्ड्रोइडमा धेरै स्रोतहरू उपभोग नगरी।
भिडियो ट्यूटोरियल जसमा म तपाईंलाई कसरी ROOT बिना स्क्रिन बन्द गर्न डबल ट्याप सक्षम गर्ने देखाउँदछ वा जटिल नक्कली ट्यूटोरियल अनुसरण गर्दछ।
नोकिया Android .3.० Oreo मा अपडेट
नोकिया ले एन्ड्रोइड .3.० ओरियोमा अपडेट प्राप्त गर्दछ। अपरेटिंग प्रणालीको सबैभन्दा नयाँ संस्करणमा तपाईंको फोन अपडेट गर्ने बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्, जुन अहिले रिलीज हुन सुरु भएको छ।
कसरी YouTube मा भिडियोहरूको अटोप्ले अक्षम गर्ने
एन्ड्रोइडका लागि युट्यूब अनुप्रयोगमा भिडियोहरूको स्वचालित प्लेब्याक असक्षम गर्नु एक धेरै साधारण प्रक्रिया हो र जसको साथ हामी डेटालाई हाम्रो दरबाट बेकार प्रयोग गर्नबाट जोगिनेछौं।
एन्ड्रोइडलाई आईफोन एक्समा कसरी परिवर्तन गर्ने
भिडियो ट्यूटोरियल जहाँ म तपाईंलाई कसरी एन्ड्रोइडलाई आईफोन एक्समा परिवर्तन गर्ने देखाउँदछु, यद्यपि शान्त छ कि हामी एन्ड्रोइड गुमाउने छैनौं किनकि यी सबै देखिन मात्र छन्।
कुनै पनि एन्ड्रोइडमा नोकिया क्यामेरा कसरी स्थापना गर्ने
भिडियो ट्यूटोरियल जसमा मैले तपाईंलाई कुनै पनि Android मा नोकिया क्यामेरा कसरी स्थापना गर्ने भनेर देखाउँदछ। नयाँ नोकिया क्यामेरा धेरै रोचक विकल्पहरू जस्तै डबल क्यामेरा वा प्रो मोडको साथ।
कसरी तपाइँको निजीकृत स्टिकर एक धेरै साधारण तरीका बाट बनाउने
व्यावहारिक भिडियो ट्यूटोरियल जसमा म तपाईंलाई आफ्नो सामाजिक नेटवर्कमा वा तपाईं जहाँ चाहानुहुन्छ प्रयोग गर्न तपाईंको आफ्नै निजीकृत स्टिकरहरू सिर्जना गर्न सबैभन्दा सरल र सबैभन्दा रमाईलो तरीका देखाउँछु।
एन्ड्रोइड को लागी सबै भन्दा राम्रो युट्यूब ट्रिक
एन्ड्रोइडमा युट्यूबबाट अधिक प्राप्त गर्न युक्तिहरू। यी ट्रिकहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसले तपाईंलाई लोकप्रिय अनुप्रयोग अझ राम्रो प्रयोगमा राख्न अनुमति दिन्छ।
कागजातहरू स्क्यान गर्न एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू
कागजातहरू स्क्यान गर्न उत्तम एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू। यी एप्लिकेसनहरूका बारे अधिक जान्नुहोस् जुन हामी आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा कागजातहरू सजिलै स्क्यान गर्न सक्षम हुनेछौं।
उपकरणहरू Android Oreo मा अद्यावधिक गरियो र परियोजना ट्रेबलसँग उपयुक्त
आजको लागि, एन्ड्रोइड ओरेओमा अद्यावधिक गरिएको र उपकरण ट्रेबलसँग उपयुक्त उपकरणहरूको संख्या अझै कम छ। हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं जुन आज उपयुक्त टर्मिनलहरू हुन्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 मा कसरी स्क्रीनशट लिने
कसरी ग्यालेक्सी S9 मा स्क्रीनशट लिने। सामसु'sको उच्च-एन्ड फोनमा स्क्रिनशट लिनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने तीन तरिकाहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
ग्यालक्सी S9 मा बटनहरूको अर्डर कसरी परिवर्तन गर्ने
ग्यालक्सी S9 स्क्रिनमा बटनहरूको अर्डर कसरी परिवर्तन गर्ने। सरल तरिका पत्ता लगाउनुहोस् जसमा तपाईं उच्च-अन्त स्क्रिनमा बटनहरूको अर्डर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
Android एन्ड्रोइड खेलहरू इन्टरनेट जडान बिना नै
Internet खेलहरू एन्ड्रोइड फोनका लागि इन्टरनेट जडान बिना नै। Android फोनका लागि खेलहरूको यस चयनको खोजी गर्नुहोस् जुन काम गर्नको लागि इन्टरनेट जडानको आवश्यक पर्दैन।
AMOLED स्क्रीनका लागि उत्तम वालपेपर अनुप्रयोगहरू
AMOLED फोनहरूको लागि वालपेपर अनुप्रयोगहरू। एक AMOLED स्क्रिनको साथ फोनको साथ प्रयोगकर्ताहरूको लागि डिजाइन गरिएको एन्ड्रोइडको लागि अनुप्रयोगहरूको यो चयन पत्ता लगाउनुहोस्।
अनुप्रयोगहरू प्रबन्ध गर्न उत्तम अनुप्रयोग
यदि तपाईं धेरै अनुप्रयोगहरू स्थापना, स्थापना हटाउने वा साझेदारी गर्ने प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने, आज मैले ल्याएको भिडियो पोष्ट ...
आर्कोस सफीर X० एक्स: ठूलो ब्याट्रीको साथ नयाँ रबड फोन
आर्कोस सफी X० एक्स: विशिष्टता, मूल्य र सुरुवात। युरोपमा आधिकारिक रूपमा बिक्रीमा रहेको फ्रान्सेली ब्रान्डबाट नयाँ रबड फोनको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
हामी नयाँ PlayMX लाई राम्ररी समीक्षा गर्छौं र मास्डेडे एपीके डाउनलोड गर्नका लागि एउटा लि attach्क संलग्न गर्दछौं, जुन हाल गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ।
अविश्वसनीय हल्का वजन, छिटो, विज्ञापन-अवरुद्ध वेब ब्राउजर धेरै शून्य सुविधाहरूको साथ
भिडियो पोष्ट जसमा म तपाईंलाई एक अविश्वसनीय वेब ब्राउजर, द्रुत, प्रकाश, धेरै कुशल विज्ञापन अवरुद्धको साथ र विकल्पहरूको साथ पूरा वेब पृष्ठहरूको स्क्रिनसटहरू लिने जत्तिकै चाखलाग्दो देखाउँछु।
तपाईंको एन्ड्रोइडको लागि उत्तम नि: शुल्क घडी विजेट
टिप्पणीहरू र सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत हामी समक्ष आएका धेरै अनुरोधहरूको जवाफ दिँदै, आज म तपाईंलाई ल्याउन सक्दछु जुन आज मेरो लागि एन्ड्रोइडको लागि उत्तम नि: शुल्क घडी विजेट हो।
ग्यालेक्सी S7 / S7 Edge, A5 (२०१)) र A2017 (२०१)) को Android Oreo मा अपडेट हुन बाँच्ने बारे
S7, A3 र A5 २०१ have प्राप्त भएको प्रमाणीकरणका अनुसार, Android Oreo मा अपडेटको आधिकारिक रूपमा आधिकारिक रूपमा सुरू हुन लागेको छ।
पुष्टि भयो: ग्यालक्सी एस ले अन्तत: एन्ड्रोइड ओरियो प्राप्त गर्दैन
कोरियन कम्पनीले ग्यालेक्सी एस Android लाई एन्ड्रोइड ओरेओमा अपडेट गर्ने योजनाको बारेमा कसैलाई श .्का लागेको थियो भने, सामसु itले यो सम्भव छैन भन्ने पुष्टि गर्ने जिम्मा लिएको थियो।
कुनै पनि एन्ड्रोइडमा स्यामसंग टर्मिनलको किनारा समारोह कसरी सिमुलेट गर्ने
भिडियो पोष्ट जसमा हामी तपाईंलाई सौंड टर्मिनलको कुनै प्रकारको एन्ड्रोइड टर्मिनलको एज प्रकार्य कसरी अनुकरण गर्ने भनेर देखाउँदछौं।
कुनै पनि एन्ड्रोइडमा सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 सूचनाहरू कसरी स्थापना गर्ने
ट्यूटोरियल भिडियो जसमा म बुझाउँछु कि सैमसंग ग्यालेक्सी S9 को सूचना कुनै पनि एन्ड्रोइडमा रूट बिना वा जटिल फ्ल्याशिंग ट्यूटोरियलहरू वा त्यस्तै केहि पालना बिना कसरी गर्न सकिन्छ।
नोकिया and र ले Android Oreo re.१ प्राप्त गर्न सुरू गर्दछ
यसको टर्मिनलको द्रुत अपडेट प्रतिबद्धताको पुष्टि गर्दै नोकिया फर्मले नोकिया and र नोकिया 8.1 २०१5को लागि ओरेओ .6.१ अपडेट सुरू गर्यो।
एन्ड्रोइड ओरियो .8.1.१ अप्रिलमा रजर फोनमा आउँदैछ र यसले एन्ड्रोइड ips.० छोड्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ
र फेरि हामी यो जाँच गर्न जारी राख्छौं कि एन्ड्रोइडको Android.० संस्करण वृद्धहरूका लागि क्र्याक गर्नको लागि कसरी कडा नट हो
Google Play ले तपाईंलाई अनुप्रयोगहरूको लोकप्रियता देखाउनेछ
गुगल प्लेले अनुप्रयोगहरूको लोकप्रियता देखाउँदछ। यस परिवर्तनको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन एन्ड्रोइड एप्लिकेसन स्टोरमा पहुँच भइसकेको छ, जसले हामीलाई देखाउँदछ कि कसरी लोकप्रिय अनुप्रयोगहरू छन्।
अनुप्रयोगहरूलाई SD कार्डमा ग्यालक्सी S9 र S9 Plus मा कसरी सार्ने
अनुप्रयोगहरूलाई कसरी ग्यालेक्सी S9 र S9 Plus को SD कार्डमा सार्ने। यदि हामीले हाम्रो ग्यालक्सी S9 को SD कार्डमा अनुप्रयोगहरू सार्न चाहन्छौं भने हामीले ल्याउनु पर्ने चरणहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
एन्ड्रोइडको लागि २ MB एमबी मुनिको सब भन्दा राम्रो खेलहरू
एन्ड्रोइडको लागि २ MB एमबी मुनिको सब भन्दा राम्रो खेलहरू। हल्का खेलहरूको यो छनोटको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन थोरै तौल हो र हाम्रो Android फोनमा सजीलै डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
सैमसंग ग्यालेक्सी S9 मा Bixby अक्षम गर्न कसरी
तपाइँ सैमसंग ग्यालेक्सी S9 मा Bixby अक्षम गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अनुसरण गर्नुपर्ने चरणहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसले गर्दा सहायक उच्च-एन्ड फोनमा एक साधारण तरीकाले निष्क्रिय गरीएको छ।
फोन नम्बर परिवर्तन भएको कारण व्हाट्सएपले नोटिस परिवर्तन गर्दछ
फोन नम्बर परिवर्तन भएको कारण व्हाट्सएपले नोटिस परिवर्तन गर्दछ। यस सूचनामा अनुप्रयोगले परिचय गर्ने परिवर्तनहरूका बारे अधिक जानकारी लिनुहोस् जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई थप सम्भावना दिन्छ।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो ग्राफिक डिजाइन अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइडको लागि चार उत्तम ग्राफिक डिजाइन अनुप्रयोगहरू। यी अनुप्रयोगहरूको बारेमा अधिक खोजी गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई ग्राफिक डिजाइनमा रुचि छ भने तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
तपाईं कसरी Huawei P20 वा P20 प्रो मा निशान लुकाउन सक्नुहुन्छ। समारोह के बारे मा अधिक जान्नुहोस् कि तपाईं Huawei बाट नयाँ उच्च-एंड फोनमा निशान लुकाउन अनुमति दिन्छ।
क्रोमकास्ट समर्थनको साथ तपाईंको मोबाइलमा डीटीटी हेर्न उत्तम अनुप्रयोग। (नि: शुल्क डीटीटी, रेडियो र प्रेस)
सेन्सेशनल अनुप्रयोग तपाईंको मोबाइलमा डीटीटी हेर्न वा क्रोमकास्ट प्रयोग गरी तपाईंको जडित टिभीमा सामग्री पठाउनुहोस्। एक All-in-One अनुप्रयोग जहाँ तपाईं टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ, स्पेनिश रेडियो सुन्न सक्नुहुन्छ र स्पेनिश प्रेस नि: शुल्क पढेर समाचारको साथ रहन सक्नुहुन्छ।
Wear OS डेवलपर पूर्वावलोकन १: Wear OS को नयाँ संस्करण अब वास्तविक छ
ओएस ओएस विकासकर्ता पूर्वावलोकन १ अब डाउनलोडका लागि उपलब्ध छ। गुगल स्मार्टवाचहरूका लागि रिम्प्याम्ड अपरेटिंग सिस्टमको पहिलो पूर्वावलोकन संस्करणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
एआरकोर १.१ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस,, हुवावे पी २०, शाओमी मी मिक्स २ एस र अधिकमा आउँदछ।
सामसु Galaxy ग्यालक्सी एस,, हुआवेई पी २०, शियाओमी मी मिक्स २ एसले एआरकोर १.१ प्राप्त गर्दछ। नयाँ अपडेटको साथ नयाँ फोनमा गुगल आउँदै गरेको वास्तविकता बारे बढि फेला पार्नुहोस्।
फेसबुक घोटाला पछि गोपनीयता सेटिंग्स सुधार
फेसबुकले गोपनीयता सेटिंग्समा सुधार ल्याउछ। सामाजिक नेटवर्कमा आएका परिवर्तनहरूका बारे बढि खोजी गर्नुहोस् जुन प्रयोगकर्ता वा विज्ञहरूलाई विश्वास गर्दैन।
गुगल प्ले चलचित्र र टिभी अन्य स्ट्रिमि services सेवाहरूसँग एकीकृत गर्दछ
गुगल प्ले चलचित्र र टिभी अन्य स्ट्रिमि services सेवाहरूसँग एकीकृत गर्दछ। गुगलको संयुक्त राज्य अमेरिकामा बहु स्ट्रिमिंग सेवाहरूको साथ अनुप्रयोग एकीकृत गर्ने निर्णयको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
Nomu S30 मिनी केवल .१.81.74 युरो मा प्राप्त गर्नुहोस्, बमप्रूफ सैन्य प्रमाणीकरणको साथ स्मार्टफोन!
यदि तपाईं सैन्य प्रमाणीकरणको साथ सदमे, थोपा र पानी र धुलोसँग प्रतिरोधी स्मार्टफोनको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, Nomu S30 mini मात्र 81.74१.XNUMX युरो भनेको टर्मिनल हो जुन तपाईं अपराजेय मूल्यमा खोज्दै हुनुहुन्छ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट ले लगभग 9००० एमएएचको ब्याट्री बोक्न सक्दछ
ग्यालक्सी नोट मा 9,,3.850० एमएएच ब्याट्री हुनेछ। ब्राण्डको उच्च-अन्तको फोनको ब्याट्री क्षमताको बारेमा थप पत्ता लगाउनुहोस् जुन बर्षको आधा भागमा स्टोरहरू हिट हुनेछन्।
गुगलले गैर-प्रमाणित उपकरणहरूमा यसको अनुप्रयोगहरूको अपरेशन रोक्न सुरू गर्दछ
गुगलले गूंगा बोल्न बन्द गर्न सुरू गर्यो र कम्पनीले प्रमाणित नभएको टर्मिनलमा यसको अनुप्रयोग र सेवाहरूको प्रयोगलाई अनुमति दिदैन।
मोटो Z ले Android .8.0.० Oreo मा अपडेट गर्दछ
एन्ड्रोइड .8.0.० ओरियो ओटीएको रूपमा मोटो Z मा आउँदछ। अपडेटको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन फर्मको फोनमा ओटीएको रूपमा आधिकारिक रूपमा पुग्छ।
एन्ड्रोइड मा सबै फेसबुक स्वामित्व अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइडका लागि फेसबुक द्वारा स्वामित्व प्राप्त सबै अनुप्रयोगहरू। सबै अनुप्रयोगहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ जुन फेसबुक द्वारा स्वामित्व प्राप्त छ।
एन्ड्रोइड मोडलाई एन्ड्रोइडमा स्वत: सक्रिय हुनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ
एन्ड्रोइडमा हवाइजहाज मोडलाई कसरी सक्रिय बनाउनबाट रोक्न सकिन्छ। यस समस्याको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जसले केही प्रयोगकर्ताहरूलाई असर गर्दछ र हामी यसलाई समाधान गर्न सक्ने बिभिन्न तरिकाहरू।
इन्स्टाग्रामले फेरि कालक्रम फीड प्रयोग गर्दछ
इन्स्टाग्रामले कालक्रम क्रम मा पोस्ट पुनर्व्यवस्थित हुनेछ। कालोनोलॉजिकल क्रममा प्रकाशनहरूको फिर्ताको लागि अनुप्रयोगको पुष्टिकरणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि अनौंठो खेलहरू
एन्ड्रोइडका लागि तीन अनौंठो खेलहरू। यो धेरै मौलिक खेलहरूको छनोट गर्नुहोस् जुन तपाईं सजिलै आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अनौंठो खेल! पहिले नै उपलब्ध छ।
फोर्टनाइट र PUBG का लागि उत्तम विकल्प Android का लागि
फोर्टनाइट र PUBG का लागि उत्तम विकल्प Android का लागि। यी बाँच्ने खेलहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन आजको सबैभन्दा लोकप्रिय खेलहरूको लागि एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा उत्तम समुद्र तट खेलहरू
एन्ड्रोइडको लागि चार उत्तम समुद्री तट खेलहरू। एन्ड्रोइडको लागि समुद्री किनारका खेलहरूको साथ यो चयन पत्ता लगाउनुहोस्। तिनीहरू सबै अब प्ले स्टोरमा डाउनलोड गर्न उपलब्ध छन्।
विद्यार्थीहरूको लागि Android अनुप्रयोग हुनै पर्दछ
4 विद्यार्थीको लागि Android अनुप्रयोग हुनु पर्छ। अनुप्रयोगहरूको यो चयन आविष्कार गर्नुहोस् जुन धेरै अवसरहरूमा विद्यार्थीहरूको लागि अत्यन्त उपयोगी हुनेछ। तिनीहरू पनि सबै स्वतन्त्र छन्।
एन्ड्रोइड को लागी सबै भन्दा राम्रो ध्यान र mindfulness अनुप्रयोगहरु
Med ध्यान र एन्ड्रोइड को लागी mindfulness अनुप्रयोगहरु। अनुप्रयोगहरूको यो चयन आविष्कार गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई व्यायामको साथ सजिलोसँग आराम गर्न मद्दत गर्दछ।
गुगल सहायकले तपाईंलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा पैसा पठाउन पहिले नै अनुमति दिन्छ
गुगल सहायकले तपाईंलाई प्रयोगकर्ताहरू बीच पैसा पठाउन अनुमति दिन्छ। नयाँ फिचरका बारे थप जान्नुहोस् जुन संयुक्त राज्यमा प्रयोगकर्ताहरूका लागि विजार्डमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
Xiaomi Mi Drop: कुनै पनि एन्ड्रोइड र प्रयोग विधिमा स्थापना
भिडियो ट्यूटोरियल जसमा म तपाईंलाई कसरी शाओमी एमआई ड्रप कुनै पनि एन्ड्रोइडमा स्थापना गर्ने र यसको सही विधि प्रयोग गर्ने र वायरलेस रूपमा सबै प्रकारका फाइलहरू पठाउन र प्राप्त गर्न देखाउँदछ।
PUBG la la Minecraft
हिलारियस खेल पूर्ण विकासमा अझै पनी, जहाँ हामी PUBG Minecrafrt अनुभव अनुकरण गर्दछ ठूलो वर्ग हेड, क्यूबिक बडी र एक pixelated शैली संग पात्रहरू जुन म व्यक्तिगत रूपमा मन पराउँछु।
मेरो Tamagotchi सधैं, तपाईको आफ्नो Android मा Tamagotchi
मेरो तामागोची फोर्भर एन्ड्रोइडको लागि बन्डई नमकोको नयाँ खेल मोड हो जुन लोकप्रिय आभासी पाल्तु जनावरको जन्मको २० औं वार्षिकोत्सवको स्मरण गर्दछ र celeb ० को दशकको अन्तमा विजयी हुन्छ।
[APK] कुनै पनि एन्ड्रोइडको लागि ओनेप्लस मौसम
के तपाइँ ओनेप्लस ओनिप्लस मौसमको मौसम अनुप्रयोग मनपराउँनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, तपाईं यो भिडियो पोस्ट मनपराउँनुहुनेछ किनकि म तपाईं लाई पूरै कार्यात्मक पोर्ट ल्याउँछु जसको साथ तपाईं आफ्नो एन्ड्रोइडमा ओनेप्लस मौसम स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ, पूर्ण रूपमा कार्यात्मक डेस्कटप विजेटको साथ पनि।
[APK] Oneplus गैलरी, कुनै पनि Android को लागि Oneplus ग्यालरी
ओनेप्लस ग्यालरी वा उही के हो, ओनेप्लस टर्मिनलहरूको फोटो ग्यालेरी अब कुनै पनि एन्ड्रोइड टर्मिनल मोडेलका लागि उपलब्ध छ।
गुगल प्लेले सजिलैसँग देशहरू परिवर्तन गर्न अनुमति दिनेछ
गुगल प्लेले तपाईंलाई सजीलै देश परिवर्तन गर्न दिनेछ। नयाँ फिचरको बारेमा बढि खोज्नुहोस् जुन अनुप्रयोग स्टोरमा तपाईंको देश परिवर्तन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको छ यदि तपाईं नयाँमा सर्नुभयो भने।
Deutsche-Telekom स्मार्टफोन अनुकूलन गर्न रोक्न
Deutsche-Telekom स्मार्टफोन अनुकूलन रोक्न जाँदै छ। जर्मन अपरेटरको निर्णयको बारे अधिक जानकारी पाउनुहोस् जुन प्रयोगकर्ताहरूका लागि ब्लोटवेयरको अन्त्य चिह्नित गर्दछ।
के तपाईं एन्ड्रोइड टर्मिनलको कुनै ब्रान्ड र मोडेलमा द्रुत मेमो प्रकार्य एलजी टर्मिनलको विशिष्ट गर्न चाहनुहुन्छ? यदि हो भने, तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ किनकि हामी तपाईलाई सबै भन्दा राम्रो द्रुत मेमो अनुप्रयोग सित्तैमा दिन्छौं।
Google Play Instant ले तपाईंलाई डाउनलोड गर्न अघि एक खेल प्रयास गर्न दिनेछ। स्यान फ्रांसिस्को मा एक कार्यक्रम मा प्रस्तुत नयाँ गुगल पहल को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
गुगल प्ले प्रोमोशनल कोडहरू अब अर्जेन्टिना, पेरू र चिलीमा उपलब्ध छन्
अन्तिम तीन देशहरू जुन गुगलले ती देशहरूको सूचीमा समावेश गरेका छन् जहाँ विकासकर्ताहरूले प्रमोशनल कोडहरू सिर्जना गर्न सक्दछन् अर्जेन्टिना, चिली र पेरू।
Android P ले पुरानो अनुप्रयोगहरू चलाउन अनुमति दिँदैन
सर्च इञ्जिन कम्पनीले घोषणा गरे अनुसार, Android P ले पुरानो अनुप्रयोगहरूको कार्यान्वयनलाई अनुमति दिँदैन र प्ले स्टोरमा पुग्ने अनुप्रयोगहरू Android .8.0.० को लागि डिजाइन गरिएको हुनुपर्दछ।
तपाईको एन्ड्रोइडका लागि उत्तम निःशुल्क 4D वालपेपर
के तपाइँ तपाइँको एन्ड्रोइड सनसनीखेको हेर्न चाहानुहुन्छ? ठीक छ, म यहाँ तपाइँलाई सबै भन्दा राम्रो नि: शुल्क 4D वालपेपर, चार-आयामिक एनिमेटेड वालपेपरहरू दिन्छु जुन तपाइँ प्रेम गर्न लाग्नु भएको छ।
एक AMOLED स्क्रिन पहिचान गर्न युक्तिहरू
एमोलेड स्क्रिन पहिचान गर्न तीन तरिकाहरू। आज हामीलाई प्रयोग गर्न सक्ने उत्तम तरिकाहरू पत्ता लगाउँनुहोस् यदि यो वास्तवमै एक AMOLED स्क्रिन हो भने।
तपाईंको सन्देशहरू पढ्नको लागि मोबाईलको लागि एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइडका लागि यी अनुप्रयोगहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसले तपाईंको फोनलाई तपाईंको सन्देशहरू ठूलो स्वरले पढ्न मद्दत गर्दछ, त्यसैले तपाईंले केहि गर्नुपर्दैन र फोनले सबै कुरा बताउनेछ।
सोनीले Xperia XA1, XA1 Plus र XA1 अल्ट्रालाई Android .8.0.० Oreo मा अपडेट गर्दछ
एन्ड्रोइड O.० ओरियो सोनी एक्सपेरिया एक्सए १, एक्सए १ प्लस र एक्सए १ अल्ट्रामा आउँदछ। अपडेटको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन OTA को रूपमा आधिकारिक रूपमा जापानी ब्रान्डको फोनमा पुग्छ,
बोटहरू पहिचान गर्न एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू
यी चार एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन उपयोगी हुन्छन् जब यो एक सरल तरिकामा बिरूवाहरू पहिचान गर्न आउँदछ। तिनीहरू सबै प्ले स्टोरमा तपाईंको फोनमा डाउनलोड गर्न उपलब्ध छन्।
सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू श्रृंखला र चलचित्रहरूका बारे सबै कुरा जान्न
यी अनुप्रयोगहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसको साथ तपाईं सँधै सजग हुन सक्षम हुनुहुनेछ तपाईंको मनपर्ने श्रृंखला वा फिल्महरू हेर्न जुन तपाईंले देख्नु हुन्छ। सजीलै तपाईको एन्ड्रोइड फोनबाट।
हुवावे र ऑनर फोनका लागि उत्तम EMUI ट्रिकहरू
Huawei र Honor फोनमा EMUI का लागि पाँच चालहरू। EMUI, चिनियाँ ब्रान्डको फोनको अनुकूलन तहबाट अधिक प्राप्त गर्न यस चालहरूको छनौट गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो टेनिस खेलहरू
एन्ड्रोइडका लागि चार उत्कृष्ट टेनिस खेलहरू। यस खेलको सब भन्दा राम्रा खेलहरूको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन हामी प्ले स्टोरमा उपलब्ध पाउन सक्छौं। त्यसोभए तपाईंसँग एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो टेनिस खेल हुनेछ।
ग्यालक्सी नोट युरोपमा एन्ड्रोइड .8.० ओरेओमा अपडेट हुन थाल्छ
युरोपमा ग्यालक्सी नोट ले एन्ड्रोइड .8.० ओरियो प्राप्त गर्न सुरू गर्दछ। युरोपमा उच्च-एंड फोनमा अद्यावधिक आगमनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
[APK] अब डाउनलोड गर्नुहोस् र Playerunphan को बैटलग्राउन्डहरू स्थापना गर्नुहोस्। (OBB विधि)
यहाँ म Google Play Store मा यसको आधिकारिक आगमन भन्दा पहिले छुटाउँछ, तपाईंलाई चाहिने सबै र स्थापना विधि ताकि तपाईं Playerunعلوم को बैटलग्राउन्ड्स, एन्ड्रोइडमा हिट गर्दै खेलको एपीके का आनंद लिन सक्नुहुनेछ। सबै खेल मोड सक्षम पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण।
फ्लोरेन्स: स्मारक उपत्यकाका निर्माताबाट नयाँ खेल एन्ड्रोइडमा आउँदछ
फ्लोरेन्स: स्मारक उपत्यकाका निर्माताबाट नयाँ खेल अब उपलब्ध छ। यस आकर्षक, अन्तर्क्रियात्मक कथामा केन वोंगको नयाँ शैली परिवर्तन गर्ने खेलको बारेमा थप फेला पार्नुहोस् जुन यसको ग्राफिक्सको लागि बाहिर खडा छ।
कसरी बनाउँने तपाईंको आफ्नै होममेड गुगल होम
साधारण व्यावहारिक भिडियो ट्यूटोरियल जसमा, पुरानो स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटको साथ, जुन हामी ड्रयरमा संकलन गर्दै थियौं धूलो स home्कलन गर्दै, हामी आफ्नै घरेलु गुगल होम सिर्जना गर्ने छौं।
गुगल फोटो अपडेट भिडियो संपादक मा नयाँ सुविधाहरु जोड्नेछ
गुगल फोटो अपडेट भिडियो संपादक सुधार गर्दछ। भिडियो सम्पादकमा सुधार प्रस्तुत गर्ने अनुप्रयोगमा आउने अपडेटको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस्।
FC बार्सिलोना - फिल्म, श्रृंखला, टिभी र फुटबल नि: शुल्क हेर्नको लागि यस सनसनीखेज अनुप्रयोगको साथ चेल्सी निःशुल्क लाइभ
सनसनीपूर्ण अनुप्रयोग गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ जसको साथ हामी एफसी बार्सिलोना - चेल्सी निःशुल्क र लाइभमा हेर्न सक्षम हुनेछौं, साथै यसमा सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क फिल्महरू, नि: शुल्क श्रृंखला, नि: शुल्क संगीत र पाठ्यक्रममा उत्कृष्ट टिभीहरू पनि हेर्न सक्दछौं। संसार पनि स्वतन्त्र।
तपाइँको लागि फेरि Netease लाई काम गर्नको लागि ट्रिक !!
अर्को ट्यूटोरियलमा स्पेनिसमा कसरी Netease स्थापना गर्ने भनेर सिकाएपछि र यसले काम गर्न छाडेको छ, अब म तपाईंहरूका लागि यो सनसनीपूर्ण ट्रिक ल्याउँछु जुन तपाईं Netease लाई फेरि धेरै, धेरै सरल तरिकाले कार्य गर्न सक्नुहुन्छ।
वनप्लस and र वनप्लस T टीले एन्ड्रोइड .5.१ ओरेओको बीटा प्राप्त गर्दछ
एन्ड्रोइड .8.1.१ ओरेओ बीटा वनप्लस and र वनप्लस T टीमा आउँदछ। चिनियाँ ब्रान्डको दुई उच्च-एंड फोनले अपरेटिंग प्रणालीको नयाँ संस्करणमा अपडेट गर्न सुरू गर्दछ।
[APK] एन्ड्रोइड पी बाट Google मार्कअप कसरी स्थापना गर्ने
भिडियो ट्यूटोरियल जसमा हामी कसरी Google मार्कअप स्थापना गर्ने ल्याउँदछौं, एक विशेष Android P प्रकार्यता जुन तपाईं अब तपाईंको Android टर्मिनलमा सक्नुहुनेछ।
सनसनीखेज नि: शुल्क फोटो फिल्टर अनुप्रयोग
भिडियो पोष्ट जसमा म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु र प्रभावकारी गुणवत्ताको फोटोहरूमा फिल्टरहरू थप्नको लागि सनसनीखेज नि: शुल्क अनुप्रयोग प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउँछ
गुगल भुक्तानीलाई पैसा पठाउन सम्पर्कहरूसँग एकीकृत हुनेछ
गुगल भुक्तान सम्पर्क अनुप्रयोगको साथ एकीकृत हुनेछ। यस नयाँ फिचरका बारे अधिक जान्नुहोस् जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई सजीलै उनीहरूको सम्पर्कहरूमा पैसा पठाउन अनुमति दिनेछ।
फेसबुक मेसेन्जर अपडेट गरीयो र नयाँ डिजाइन सुरूवात गर्दछ
फेसबुक मेसेन्जरको यसको अपडेटमा नयाँ डिजाइन छ। अपडेटको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस् जुन सन्देश अनुप्रयोगमा आउँदछ जुन प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्न थाल्छ।
प्ले स्टोर नेभिगेसन परिवर्तनको साथ अपडेट भयो
प्ले स्टोर नेभिगेसन परिवर्तनको साथ अपडेट भयो। अनुप्रयोग स्टोर अपडेटको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन यसको डिजाइनमा हल्का रूपमा परिवर्तन गर्दछ।
तपाईंको मनपर्ने संगीत प्लेयरको लागि उत्तम एन्ड्रोइड प्लगइन
नयाँ भिडियो पोष्ट जसमा म तपाईंलाई मेरो लागि के ल्याउँदछ तपाईंको संगीत प्लेयर वा स्ट्रिमि music संगीत सेवाको लागि उत्तम एन्ड्रोइड पूरक हो। एक पूर्ण नि: शुल्क पूरक जुन तपाईंको सबै टर्मिनलहरूमा अपरिहार्य हुनेछ।
सर्वश्रेष्ठ Android अनुप्रयोगहरू चीनियाँ, कोरियाली वा जापानी सिक्नको लागि
Android Android अनुप्रयोगहरू चीनियाँ, कोरियाली वा जापानीज सिक्न। यी अनुप्रयोगहरूको बारेमा अधिक खोजी गर्नुहोस् जुन तपाईं यी भाषाहरू सिक्न सक्नुहुनेछ जुन अधिक ध्यान र विशेष मद्दतको आवश्यकता पर्दछ।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा उत्तम संवर्धित वास्तविकता खेलहरू
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा उत्तम संवर्धित वास्तविकता खेलहरू। यस छनौटलाई सबै भन्दा राम्रो खेलहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईं एन्ड्रोइड फोनहरूको लागि बढाइएको वास्तविकताको कोटी भित्र फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू तपाईंको कार कती छिटो जान्नको लागि
एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू तपाईंको कार कती छिटो जान्नको लागि। यी अनुप्रयोगहरूको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईंलाई सब समयमा ड्राइभ गरिरहनु पर्ने गति बताउँदछ र तपाईंलाई गति सीमा नाघ्नबाट रोक्छ।
प्ले स्टोरका लागि सबै भन्दा राम्रो तरिकाहरू
प्ले स्टोरको फाइदा लिनको लागि चार उत्तम तरिकाहरू। यी ट्रिकहरूको श्रृंखलाहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन हामीलाई एन्ड्रोइड फोनको एप्लिकेसन स्टोरको अझ राम्रो प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। यस तरीकाले हामी यसको प्रयोगबाट हामी यसलाई बाहिर निकाल्न सक्दछौं।
एन्ड्रोइडका लागि उत्तम फिटनेस अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइडका लागि चार उत्तम फिटनेस अनुप्रयोगहरू। यस छनौटलाई एन्ड्रोइडका लागि चार फिटनेस अनुप्रयोगहरूको साथ खोज्नुहोस् जुन तपाईंलाई फिट हुन मद्दत गर्दछ र तपाईंको अवस्था र फिटनेसलाई सरल तरिकामा सुधार गर्दछ।
एन्ड्रोइड को लागी सबै भन्दा राम्रो गुगल क्रोम ट्रिक्स
एन्ड्रोइड को लागी सबै भन्दा राम्रो गुगल क्रोम ट्रिक्स। यी साधारण तरिकाहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईंको एन्ड्रोइड फोनमा गुगल क्रोमको प्रयोगबाट तपाईंलाई बाहिर निकाल्न अनुमति दिनेछ। ब्राउजरका लागि सबै भन्दा राम्रा चालहरूको आनन्द लिनुहोस्।
एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू इन्स्टाग्राममा पोष्टहरू अनुसूची गर्न
एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू इंस्टाग्राममा पोष्टहरू तालिका बनाउन। सजिलैसँग अनुसूची गर्न र इन्स्टाग्राम पोस्टहरूको योजना बनाउन यी अनुप्रयोगहरूको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस्। तपाईको एन्ड्रोइड फोनमा हाल डाउनलोड गर्न सबै उपलब्ध छन्
HTC U Ultra Android 8.0 Oreo मा अपडेट हुन्छ
एन्ड्रोइड O.० ओरेओ आधिकारिक रूपमा एचटीसी यू अल्ट्रामा आइपुग्छ। गुगलको अपरेटिंग प्रणालीको नयाँ संस्करणमा तपाईंको फोन अपडेट गर्ने बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
सामाजिक सन्देशको साथ एन्ड्रोइड खेलहरू
सन्देश र सामाजिक आलोचनाको साथ चार Android खेलहरू। यी खेलहरूको बारेमा अधिक खोजी गर्नुहोस् जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सामाजिक समस्याहरूको सचेत गराउँदछ।
एन्ड्रोइड लि gender्ग हिंसा को शिकार को लागी सुरक्षित हुनेछ
एन्ड्रोइड लि gender्ग हिंसा को शिकार को लागी सुरक्षित हुनेछ। सेक्सिस्ट हिंसाको शिकार भएका व्यक्तिहरुलाई बचाउन मद्दत गर्न Android को लागि BQ र सोनी जस्ता कम्पनिहरु को विचारहरु को बारे मा अधिक खोज्नुहोस्।
हामी तपाइँलाई Nubia N3 प्रस्तुत गर्दछौं, एक सुन्दर मोबाइल m००mAh ब्याट्रीको साथ
नुबिया N3 भर्खरै 5.000,००० मिलिअम्प्सको ठूलो ब्याट्रीको साथ प्रस्तुत गरिएको छ जुन १ a: format ढाँचामा .6.01.०१-ईन्च स्क्रीनको साथ, हामीलाई नचाहिने स्वायत्तता प्रदान गर्दछ, र अन्य धेरै सुविधाहरू जुन यस वर्गको विवादमा चतुर्भुज राख्नेछ। यस वर्ष दायरा औसत। यसलाई जान्नुहोस्!
[APK] डाउनलोड र स्थापना डाउनलोड कसरी Netease 2018 रूट बिना। एएच र स्पेनिशमा !!
भिडियो पोष्ट जसमा मँ तपाईलाई डाउनलोड गर्छु र Netease २०१ install कसरी स्थापना गर्ने भनेर देखाउँछु स्प्यानिशमा र जड टर्मिनल बिना वा जटिल व्यावहारिक ट्यूटोरियल अनुसरण नगरी।
एन्ड्रोइड पी रिलिज तालिका प्रकट भयो
एन्ड्रोइड पी रिलिज तालिका प्रकट भयो। Google को अपरेटिंग प्रणालीको नयाँ संस्करणको अन्तिम संस्करण कहिले आउनेछ भन्ने बारे थप जान्नुहोस्।
फेसबुक मेसेन्जर लाइटले भिडियो कलहरू प्रस्तुत गर्दछ
फेसबुक मेसेन्जर लाइट भिडियो कल परिचय। लाइटवेट मेसेजिंग अनुप्रयोगमा प्रस्तुत गरिएको नयाँ फिचरका बारे थप जान्नुहोस्।
Spotify गर्न २ निःशुल्क विकल्पहरू
भिडियो पोष्ट जसमा म तपाईं लाई स्पोटिफाई गर्न को लागी २ उत्तम नि: शुल्क विकल्पहरु लाई ल्याउँदछ, डगफुड र लाइक जस्तो मोडको कार्य नगरिकन बदल्न।
Android P अब आधिकारिक छ: सबै विवरणहरू जान्नुहोस्
Android P को पहिलो संस्करण यहाँ छ: यसको विवरणहरू जान्नुहोस्। अपरेटिंग प्रणाली को नयाँ संस्करण को पहिलो संस्करण को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइडमा कुल ब्ल्याकबेरी अनुभव लाइभ गर्नुहोस्
भिडियो जुनमा म तपाईंलाई सबै ब्ल्याकबेरी अनुप्रयोगहरू, ब्ल्याकबेरी लन्चर, सम्पर्कहरू, सन्देशहरू, बीबीएम, आदि स्थापना गरेर एन्ड्रोइडमा सम्पूर्ण ब्ल्याकबेरी अनुभव कसरी बाँच्ने भनेर देखाउँदछु।
एन्ड्रोइड पी ले तपाईंलाई आफ्नो मोबाइल ब्लुटुथ किबोर्ड वा माउसको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ
Android P ले तपाईंलाई फोन ब्लुटुथ माउसको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ। अपरेटिंग प्रणालीको नयाँ संस्करणको साथ आउने नयाँ सुविधाको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
एन्ड्रोइड पी ले तपाईंलाई टेलिओपेरेटर र अज्ञात नम्बरहरूबाट कलहरू रोक्न अनुमति दिनेछ
Android P ले अज्ञात नम्बरहरूमा ब्लकि numbers कलहरू परिचय गर्दछ। एन्ड्रोइड पी को साथ आउने नयाँ सुविधा को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
टेलिग्रामले धेरै यूरोपमा काम गर्दैन
टेलिग्रामले धेरै यूरोपमा काम गर्दैन अज्ञात समस्याहरूका कारण कम्पनीले ट्विटर जस्ता सोशल नेटवर्कमा स्वीकार गर्न चलाएको छ
यी ट्रिकहरूको साथ गुगल कीपबाट अधिक प्राप्त गर्नुहोस्
T सल्लाहहरू Google किपबाट अधिक प्राप्त गर्नका लागि। यी साधारण तरिकाहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईं उत्तम तरिकामा अनुप्रयोग प्रयोग गर्न अनुमति दिनुहुनेछ।
एन्ड्रोइड को लागी सबै भन्दा राम्रो शूटिंग खेलहरु
एन्ड्रोइड को लागी सबै भन्दा राम्रो शूटिंग खेलहरु। शूटर गेमहरूको यो छनौटको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन तपाईं अब आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
ग्यालेरी फोटो संगठित गर्न उत्तम एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू
तपाईको ग्यालरी फोटोहरू व्यवस्थित गर्न उत्तम एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू। यस कोटि बीचमा सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरूको साथ यो चयन पत्ता लगाउनुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो साहसिक खेलहरू
एन्ड्रोइड को लागी सबै भन्दा राम्रो ग्राफिक साहसिक खेल। यी साहसिक साहसिक खेलहरूका बारे थप जानकारी पाउनुहोस् जुन तपाईं आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो घोडा खेलहरू। एन्ड्रोइडका लागि पाँच घोडा खेलहरूको छनौट पत्ता लगाउनुहोस् जुन हामी अब आफ्नो फोनमा डाउनलोड गर्न सक्दछौं।
अर्को नुबिया स्मार्टफोनहरू शुद्ध एन्ड्रोइडको साथ आउँनेछ। अपरेटिंग सिस्टमको यो संस्करण प्रयोग गर्न चिनियाँ कम्पनीको निर्णयको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि पाँच उत्तम पीडीएफ पाठकहरू अब उपलब्ध छन्। यस चयनलाई सब भन्दा राम्रो PDF पाठकहरूसँग पत्ता लगाउनुहोस् जुन हाल हामी एन्ड्रोइडमा डाउनलोड गर्न सक्छौं।
क्रिप्टोकरन्सीको मूल्य अनुसरण गर्न सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू
क्रिप्टोकरन्सीको मूल्य अनुसरण गर्न सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू। यी अनुप्रयोगहरू पत्ता लगाउनुहोस् जससँग तपाईं सबै समयमा क्रिप्टोकुराँसीको मूल्य अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ।
सुधार गरिएको ओपेरा ब्राउजर क्रोम भन्दा धेरै छिटो
आज म तपाईंलाई यस प्रकारको तुलनात्मक भिडियोमा ल्याउँदछु, एउटा ग्राफिक र दृश्य उदाहरण जुनमा म तपाईंलाई देखाउँछु कसरी नवीकृत ओपेरा वेब ब्राउजर गुगलको क्रोम भन्दा धेरै छिटो छ। आऊ, उसलाई उसको कपाल दिनुहोस् !!!
एप्लिकेसनहरू जुन उनीहरूलाई जस्तो देखिदैनन्, आज संसारमा सबैभन्दा खराब रेडियो छ
हामी एप्लिकेसनको सेक्सनसँग फर्क्यौं जुन उनीहरूले हामीलाई जस्तो देखिन्छन्, यस पटक सकारात्मक स्वरमा म प्रस्तुत गर्दै छु र विश्वको सबैभन्दा खराब रेडियो भनिने अनुप्रयोग सिफारिस गर्न जाँदैछु। तपाइँ प्रेम गर्न लाग्नु भएको एक अनुप्रयोग।
Honor 7X स्पेनमा एन्ड्रोइड 8.0 Oreo को बीटा प्राप्त गर्दछ
एन्ड्रोइड .8.0.० ओरियो बेटा स्पेनमा हर्नर X एक्ससम्म पुग्छ। चिनियाँ ब्रान्डको मध्य दायराको साथ प्रयोगकर्ताहरूको लागि बीटा कार्यक्रम सुरू गर्ने बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
अब तपाई हेरी पॉटरका लागि पूर्व-दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ: होग्वार्ट्स रहस्य
ह्यारी पॉटरका लागि पूर्व-दर्ता: होगवार्ट्स रहस्य अब खुला छ। श्रृंखलामा लोकप्रिय खेल को पूर्व-दर्ता को उद्घाटन को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
कार्यक्षमताका साथ ट्विटरबाट एपीके डाउनलोड गर्नुहोस् पछि हेर्न आइटमहरू बचत गर्न
डाउनलोड गर्नुहोस् र ट्विटर एपीके स्थापना गर्नुहोस् कार्यक्षमताका साथ आईटमहरू पछि हेर्नको लागि बचत गर्नुहोस्, नयाँ कार्यक्षमता जुन अझै सम्मिलित गरिएको छैन जुन तपाईं प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
Android P को आईरिस स्क्यानरलाई अनलक गर्ने तरीकाको रूपमा नेटिभ समर्थन हुनेछ
एन्ड्रोइड पीसँग आईरिस स्क्यानरका लागि नेटिभ समर्थन हुनेछ। यस वर्ष एन्ड्रोइड पी उपकरणहरूमा आईरिस स्क्यानरको आगमनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
ह्या Chat्गआउट्स च्याट: पहिले नै प्ले स्टोरमा कम्पनीहरूको लागि नयाँ सन्देश अनुप्रयोग
ह्या Chat्गआउट्स च्याट: कम्पनीहरूको लागि सन्देश अनुप्रयोग। यस Google अनुप्रयोगको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन प्ले स्टोरमा पहिले नै उपलब्ध छ।
ड्र्यागन बल उत्तम वालपेपर, रिंगटोन, कमिक्स र अधिक
भिडियो जसमा म तपाईंलाई देखाउँछु कि कसरी ड्रैगन बल श्रृंखला, उच्च वालपेपर, रिंगटोन र अधिसूचना वा अलार्म, हास्य, चलचित्रहरू, इत्यादि को उच्च गुणवत्ता वाले वालपेपर डाउनलोड गर्न।
नोकिया ले बीटा रूपमा एन्ड्रोइड .3.० ओरेओ प्राप्त गर्दछ
एन्ड्रोइड .8.0.० ओरियो नोकिया bet मा बीटा रूपमा देखा पर्दछ। अपडेटको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन ब्रान्डको फोनमा आउँदछ जुन अपडेट गर्न अन्तिम हो।
Android P ले अन्तत: OLED- प्रकारको स्क्रीनका लागि अन्धकार विषयवस्तु प्रदान गर्दैन
एन्ड्रोइड को अर्को संस्करण, एन्ड्रोइड पी, नेटिभ रूपले गाढा विषयवस्तु एकीकृत गर्दछ OLED- प्रकार स्क्रीनहरुमा टर्मिनल को ब्याट्री खपत कम गर्न को लागी।
एन्ड्रोइडका लागि उत्तम योग अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइडका लागि उत्तम योग अनुप्रयोगहरू। घरमा योग अभ्यास गर्नका लागि उपलब्ध उत्तम अनुप्रयोगहरूको साथ यो चयन आविष्कार गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो अपराध र रहस्य खेलहरू
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो अपराध र रहस्य खेलहरू। यो छनौट पत्ता लगाउनुहोस् सबैभन्दा उत्तम अपराध र अहिले रहस्यमय खेलहरूको साथ।
एन्ड्रोइडका लागि स्वाइपको उत्तम विकल्पहरू
एन्ड्रोइडका लागि स्वाइपको उत्तम विकल्पहरू। यी पाँच कीबोर्डहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन भर्खरको सम्पन्न स्वाइप अनुप्रयोगलाई पूर्ण रूपमा बदल्न सक्दछ।
एन्ड्रोइड को लागी सबै भन्दा राम्रो खाना पकाने अनुप्रयोगहरु
एन्ड्रोइड को लागी सबै भन्दा राम्रो खाना पकाने अनुप्रयोगहरु। तपाइँको स्मार्टफोनमा डाउनलोड गर्न पहिले नै उपलब्ध सबै स्वादहरूको लागि विधि अनुप्रयोगहरूको साथ यो खोज आविष्कार गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइडमा गाउन सिक्न सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइडमा गाउन सिक्न सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू। टेक्निक सिक्न र तपाईंको आवाज न्यानो गर्नका लागि उपलब्ध अनुप्रयोगहरूको बारेमा थप खोजी गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो मल्टिप्लेयर खेलहरू
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो मल्टिप्लेयर खेलहरू। एन्ड्रोइडका लागि खेलहरूसँगै यो छनौट पत्ता लगाउनुहोस् जुन हामीलाई मल्टिप्लेयर मोड प्रयोग गर्ने विकल्प प्रस्ताव गर्दछ।
तपाईको मोबाइलको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न अनुप्रयोगहरू
Applications अनुप्रयोगहरू तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्रयोगको नियन्त्रण गर्न। यी अनुप्रयोगहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसले तपाईंलाई फोनमा दुर्व्यसनबाट जोगिन र जिम्मेवार प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ।
पहिलो Android Go स्मार्टफोनले MWC 2018 मा डेब्यु गर्नेछ
पहिलो Android Go स्मार्टफोन MWC २०१ M मा आईपुग्नेछ। गुगलले अपरेटिंग सिस्टमको लाइट संस्करणको बारेमा घोषणा गरेको समाचारको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
तपाइँको एन्ड्रोइडलाई अधिक उत्पादक बनाउने अनुप्रयोग। अब एक दिनको लागि मात्र नि: शुल्क !!
भिडियो जसमा म तपाईलाई एक अनुप्रयोग देखाउँछु जसले तपाईको एन्ड्रोइडलाई अधिक उत्पादक बनाउँदछ, एक अनुप्रयोग जुन अब केहि घण्टा तपाईले निःशुल्क भुक्तान संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
मानसिक अस्पताल: पूर्वी ब्लॉक २, सीरन्ट समयको लागि निःशुल्क साइलेन्ट हिलको शैलीमा एक डरावनी खेल
यदि तपाईं एन्ड्रोइडको लागि शुद्ध शान्त पहाड शैलीमा डराउने खेलहरू मनपराउनुहुन्छ भने, मानसिक अस्पताल: पूर्वी ब्लाक २ डाउनलोड गर्नका लागि भाग्नुहोस् अब देखि र सीमित समयको लागि हामी यसलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क पाउँदछौं।
थ्रीडी सोउराउन्ड संगीत प्लेयर, के यो एक अनुप्रयोगको लागि लगभग ११ यूरो तिर्न लायक छ?
एन्ड्रोइड S थ्री सौरउन्ड म्यूजिक प्लेयर, एक खेलाडी जुन हामी १ free दिनको लागि नि: शुल्क प्रयास गर्न सक्दछौं र त्यसको लागि लगभग ११ यूरो खर्च आउँछ। तर के ती लगभग ११ यूरो तिर्न लायक छ?
Android P ले पृष्ठभूमि अनुप्रयोगहरूमा माइक्रोफोन पहुँच रोक्नेछ
Android P ले पृष्ठभूमि अनुप्रयोगहरूमा माइक्रोफोन पहुँच रोक्नेछ। नयाँ अपरेटिंग प्रणाली सुविधाको बारे अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् जुन प्रयोगकर्ताको गोपनीयतालाई सुरक्षित राख्न खोज्छ।
Android P ले पृष्ठभूमि अनुप्रयोगहरूमा क्यामेरा पहुँच रोक्दछ
Android P ले पृष्ठभूमि अनुप्रयोगहरूमा क्यामेरा पहुँच रोक्दछ। अपरेटिंग प्रणालीमा आउने नयाँ सुविधाको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस्।
सम्पर्क बचत नगरी कसरी व्हाट्सएप पठाउने
साधारण व्यावहारिक ट्यूटोरियल जसमा म तपाइँलाई हाम्रो व्यक्तिगत एजेन्डामा सम्पर्क बचत नगरी कसरी व्हाट्सएप पठाउने भनेर देखाउँछु, जससँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौं त्यस व्यक्तिको फोन नम्बर थाहा पाएर।
Android लाई कसरी रिसेट गर्ने। (टर्मिनल खोल्दैन भने पनि विभिन्न तरिकाहरू)
व्यावहारिक एन्ड्रोइड भिडियो ट्यूटोरियल जसमा म तपाईंलाई देखाउँछु कि Android लाई कसरी विभिन्न तरिकामा फ्याक्ट्रीमा रिसेट गर्ने, टर्मिनलहरूका विभिन्न मोडेलहरूबाट अनुकूलनको विभिन्न तहहरूको साथ र रिकभरीबाट तपाईंको एन्ड्रोइड चालू छैन भने।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो अनन्त रन खेलहरू
एन्ड्रोइडका लागि चार उत्तम अन्तित रन गेमहरू। यस विधाका खेलहरूको छनौट पत्ता लगाउनुहोस् जुन हामी अब एन्ड्रोइड उपकरणहरूमा डाउनलोड गर्न सक्दछौं।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो बाँच्न खेलहरू
एन्ड्रोइडको लागि चार सर्वश्रेष्ठ बाँच्ने खेलहरू। यस चयनलाई सब भन्दा राम्रा खेलहरूसँग पत्ता लगाउनुहोस् जुन हामी एन्ड्रोइड उपकरणहरूको लागि यस विधा बीचमा फेला पार्न सक्छौं।
एन्ड्रोइडको लागि उत्तम भर्चुअल रियलिटी अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइडको लागि चार उत्तम भर्चुअल रियलिटी अनुप्रयोगहरू। एन्ड्रोइडमा भर्चुअल वास्तविकता प्रयोग गर्ने यी अनुप्रयोगहरू बारे अधिक जान्नुहोस्।
Android मा बच्चाहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो शैक्षिक अनुप्रयोगहरू। यो अनुप्रयोगलाई पाँच अनुप्रयोगहरूको साथ पत्ता लगाउनुहोस् जसले बच्चा सिक्न मद्दत गर्दछ।
मेटिएका फाईलहरू पुन: प्राप्ति गर्न उत्तम एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू। एन्ड्रोइडमा मेटाइएको फाइलहरू पुनःप्राप्त गर्न हामी भेट्टाउन सक्ने अनुप्रयोगहरूको यो चयनको बारे अधिक जान्नुहोस्।
तपाईको एन्ड्रोइड फोनलाई लामो समय सम्म बनाउनको लागि पाँच सल्लाहहरू
हाम्रो Android फोनको लागि सुझाव लामो समय सम्म रहन्छ। यस उपकरणको श्रृंखलाको अन्वेषण गर्नुहोस् जससँग हाम्रो उपकरणलाई लामो समयको लागि राम्रो बनाउँदछ।
एन्ड्रोइड को लागी सबै भन्दा राम्रो तर्क खेलहरु
एन्ड्रोइडमा छ वटा उत्तम तर्क खेलहरू उपलब्ध छन्। यो एन्ड्रोइडमा डाउनलोड गर्न सकिने तर्क विधामा सबै भन्दा राम्रो खेलहरूको साथ यो चयन पत्ता लगाउनुहोस्।
एन्ड्रोइडमा टिभी हेर्न अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइडमा टिभी हेर्नका लागि पाँच अनुप्रयोगहरू। यी पाँच अनुप्रयोगहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसको साथ हामी हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा टेलिभिजन हेर्न सक्दछौं।
एन्ड्रोइड सम्झँदै: संगीत प्लेयर [[APK]
हामी तपाईंलाई एपीके ढाँचामा संगीत प्लेयर bring ल्याउन समयमै फर्कन्छौं जुन एक पटक एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू र सब भन्दा शानदार संगीत प्लेयरहरू मध्ये एक थियो।
कुनै पनि अनुप्रयोग छैन: अनुप्रयोग जुन केहि पनि गर्दैन र पहिले नै १ मिलियन भन्दा बढी डाउनलोडहरू छ
कुनै पनि अनुप्रयोग छैन: अनुप्रयोग जुन केहि पनि गर्दैन र पहिले नै १ मिलियन भन्दा बढी डाउनलोडहरू छ। यस जिज्ञासु अनुप्रयोगको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन प्ले स्टोरमा हिट छ।
सामसुले ग्यालक्सी S8 र S8 + को लागि Android Oreo मा अपडेट गर्न रोक्दछ
सामसुले ग्यालक्सी S8 र S8 + को लागि Android Oreo मा अपडेट गर्न रोक्दछ। कोरियाली कम्पनीले गर्न बाध्य भएको निर्णयको बारे बढी जानकारी लिनुहोस्।
व्यावहारिक भिडियो ट्यूटोरियल जसमा म तपाईंँलाई सबै एमुलेटरहरू र खेलहरू तपाईंको एन्ड्रोइड टर्मिनलमा नि: शुल्क आनन्द लिनको लागि देखाउँछु।
गुगल फोटाहरूको अर्को संस्करणले अब जेली बीनलाई समर्थन गर्दैन
गुगल फोटोहरूमा अर्को अपडेट अबदेखि एन्ड्रोइड जेली बीनसँग उपयुक्त छैन, तर यसले पुरानो उपकरणहरूमा काम गर्न रोक्दैन, अघिल्लो संस्करणको रूपमा। उपलब्ध हुन जारी रहनेछ।
नोकिया ले आधिकारिक रूपमा Android 8.१ ओरेओमा अपडेट गर्दछ
एन्ड्रोइड .8.1.१ आधिकारिक रूपमा नोकिया arri मा आइपुग्छ। अपडेटको बारेमा बढि जानकारी पाउनुहोस् जुन अब ब्रान्डको फोनका साथ प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ।
सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू तपाइँको पार्टनरसँग वेलेंटाइन दिवस मनाउन
केवल भ्यालेन्टाईन डे मात्र उपस्थित छैन, किनकी हामी Google पार्टनरले खाता प्रदान गर्ने पारिवारिक खाता मार्फत पनि हाम्रो पार्टनरलाई आवेदन दिन सक्छौं।
कसरी नि: शुल्क वेलेंटाइन दिवस अभिवादन सिर्जना गर्न
भिडियो ट्यूटोरियल चरण चरण जसमा म तपाईंलाई भ्यालेन्टाइन डे अभिवादन नि: शुल्क र पूर्ण रूपमा मौलिक तरीकाले सिर्जना गर्न सिकाउँछु
Yiii, स्पेन मा बनाईएको एक फरक इन्स्ट्यान्ट सन्देश अवधारणा
Yiii एक अनुप्रयोग हो जुन हामीलाई तत्काल सन्देशको बिल्कुल बिभिन्न अवधारणा प्रदान गर्दछ जुन हामी यी समयमा प्रयोग गर्दै आएका छौ भन्दा, एक अनुप्रयोग जुन मानिस बीचको वास्तविक समयमा सुरक्षा र सञ्चारमा आधारित छ।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो वास्तविक समय रणनीति खेलहरू
Android को लागी best उत्तम वास्तविक समय रणनीति खेल। ETR विधा बीच उपलब्ध खेलहरूको यस छनौटको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा गाह्रो खेलहरू
एन्ड्रोइडमा तीन सब भन्दा गाह्रो खेलहरू। यस चयनलाई खेलको साथ पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईंको लागि कुनै पनि समयमा सजिलो हुँदैन। त्यसोभए चुनौतीको लागि तयार हुनुहोस्।
एन्ड्रोइडमा मारियो कार्टको उत्तम विकल्पहरू
एन्ड्रोइडमा मारियो कार्टको चार सर्वश्रेष्ठ विकल्पहरू। यी चार खेलहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन निन्टेन्डो खेलको लागि उत्तम विकल्प हो।
एन्ड्रोइड स्वत: क्लेरियन, कर्मा अटोमोटिभ, बॉस अडियो टोलीहरू अन्यमा आउँदछ
एन्ड्रोइड अटो वेबसाईटले भर्खर उपकरणको संख्या विस्तार गरेको छ जुन पहिले नै यस सवारी संचार टेक्नोलोजीसँग मिल्दो छ।
एन्ड्रोइडको लागि उत्तम एनिमोजी अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइडका लागि तीन उत्तम एनिमोजी अनुप्रयोगहरू। तपाईको एनिमोजिस सिर्जना गर्नका लागि उत्तम अनुप्रयोगहरूको साथ यो चयन आविष्कार गर्नुहोस्
एन्ड्रोइडका लागि उत्तम जीपीएस नेभिगेटरहरू
एन्ड्रोइडका लागि चार उत्तम जीपीएस नेभिगेटरहरू। GPS नेभिगेटरहरूको यो छनौटको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन हामी हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा डाउनलोड गर्न सक्दछौं।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो रेडियो अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइडको लागि चार उत्तम रेडियो अनुप्रयोगहरू। गुगल प्लेमा उपलब्ध उत्तम रेडियो अनुप्रयोगहरूको साथ यो चयन पत्ता लगाउनुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालक्सी एस,, एस Ed एज, एस ge एज + र नोट ले एन्ड्रोइड ओरियो प्राप्त गर्न सक्दछ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस,, एस Ed एज, एस + एज + र नोट ले एन्ड्रोइड ओरियो प्राप्त गर्नेछ। ब्रान्डको फोनमा पुग्न सक्ने अपडेटको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो रेट्रो खेलहरू
एन्ड्रोइडका लागि चार उत्तम रेट्रो खेलहरू। यस रेट्रोमा उत्तम रेट्रो खेलहरूको बारेमा अझ धेरै खोज्नुहोस् जुन हामी आज एन्ड्रोइडका लागि फेला पार्न सक्छौं।
घरमा खाना अर्डर गर्न उत्तम अनुप्रयोगहरू
घर मा खाना अर्डर गर्न चार उत्तम अनुप्रयोगहरू। यो एन्ड्रोइड फोनबाट घरमा अर्डर गर्न अनुप्रयोगहरूको साथ यो छनौट पत्ता लगाउनुहोस्।
एक धेरै साधारण तरिकामा एन्ड्रोइडमा भिडियो कसरी स्थिर गर्ने
व्यावहारिक भिडियो ट्यूटोरियल जसमा मँ देखाउँछु कि कसरी एन्ड्रोइड मा भिडियो स्थिर गर्न को लागी एक साधारण अनुप्रयोग को उपयोग संग यो एक पूर्ण स्वचालित तरीकाले गर्छ र हामीलाई अविश्वसनीय परिणाम दिन्छ।
गुगल क्यालेन्डर million०० मिलियन डाउनलोडमा पुग्छ
गुगल क्यालेन्डरले पहिले नै million०० मिलियन डाउनलोडहरू संकलन गरिसकेको छ। डाउनलोडको संख्याको बारे अधिक जान्नुहोस् जुन अनुप्रयोगले प्राप्त गरेको छ।
कसरी कुनै पनि अनुप्रयोगबाट सशर्त, बोलिएको सूचनाहरू कसरी स्क्रिन अफ सहित!
भिडियो ट्यूटोरियल जसमा म कसरी सशर्त कुनै अनुप्रयोगबाट बोलिएको सूचनाहरू छ भनेर वर्णन गर्दछ, विशेष गरी जब तपाईं ड्राइभिंगको लागि उपयोगी हुन्छ।
टेलिग्राम 4.8 स्ट्रीमिंग जस्ता समाचारको साथ आउँछ
टेलिग्राम 4.8.। धेरै महत्त्वपूर्ण समाचारको साथ प्रस्तुत गरिएको छ। सन्देश अनुप्रयोगको अपडेटको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन हामीलाई बिभिन्न समाचारहरूको साथ छोड्दछ।
गुगल क्रोमले पृष्ठ लोड गर्न speeding% सम्ममा चाँडो पुर्‍याउँछ।
गुगल क्रोम पृष्ठहरू यसको नयाँ सुविधाको साथ छिटो लोड गर्दछ। नयाँ सुविधा एन्ड्रोइड मा ब्राउजर मा चाँडै आउँदैछ भन्ने बारे अधिक जान्नुहोस्।
[APK] अब रूटरलेस पिक्सेल लन्चर नो रुटको नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्
यहाँ तपाईंसँग कुनै Android .5.0.० वा उच्च संस्करणमा डाउनलोड गर्न र म्यानुअल स्थापनाको लागि रुटलेस पिक्सेल लन्चरको नयाँ संस्करणको एपीके छ।
सामसुले S7, A5 2017, A3 2017 र ट्याब S3 को लागि Android Oreo मा काम गरिरहेको छ
सामसुले ग्यालक्सी एस,, ए7२०१ 3, ए 2017 २०१5वा ट्याब एस O ओरेओमा अपडेट गर्नेछ। यी फोनहरूमा अद्यावधिक आउने बारे बढि खोजी गर्नुहोस्।
सोनी Xperia X र Xperia X कॉम्प्याक्ट Android .8.0.० Oreo मा अपडेट
एन्ड्रोइड O.० ओरियो सोनी एक्सपेरिया एक्स र एक्सपेरिया एक्स कम्प्याक्टमा आउँदछ। ब्रान्डको दुई मध्य-दायरा फोनहरूमा अद्यावधिक आउने बारे बढि जानकारी लिनुहोस्।
यसको सुरूवात भएको re महिना पछि एन्ड्रोइड ओरेओको शेयर १% भन्दा बढी पुगेको छ, विशेष गरी १.१% खडा भएको छ, जबकि एन्डोइड नौगट अझै पनि एन्ड्रोइड अपोपेसनमा राजा छन् जसको नजिकै मार्शलमेलो छन।
Android P का कलहरू रेकर्ड गर्न नेटिभ प्रकार्य हुनेछ। गुगल हाल काम गरिरहेको सुविधाको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि3बिभिन्न सुरुवातकर्ताहरू
यहाँ तपाईंसँग यो व्यक्तिगत छन Android को लागी different बिभिन्न लाँचरको। Un Launcher एक अर्का भन्दा धेरै फरक छ र एकले हामीलाई केहि फरक र फरक प्रदान गर्दछ।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो क्विज खेलहरू
एन्ड्रोइडका लागि पाँच उत्तम क्विज खेलहरू। खेलहरूको यो चयन पत्ता लगाउनुहोस् जसले तपाईंको ज्ञानलाई परीक्षामा पार्छ।
एन्ड्रोइडमा पासवर्डहरू बचत गर्न सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइडमा पासवर्डहरू बचत गर्नका लागि पाँच उत्तम अनुप्रयोगहरू। यी अत्यधिक उपयोगी पासवर्ड प्रबन्धकहरूको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो निर्माण खेलहरू
एन्ड्रोइडका लागि पाँच उत्तम निर्माण खेलहरू। यस एन्ड्रोइडको बारेमा हामीले छनौट सर्वश्रेष्ठ निर्माण खेलहरूको बारेमा अधिक खोजी गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि गुगल ड्राईवमा उत्तम विकल्पहरू
एन्ड्रोइडका लागि गुगल ड्राईवमा उत्तम विकल्पहरू। यी अनुप्रयोगहरू खोज्नुहोस् जुन हामीलाई क्लाउडमा फाईलहरू भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो नाव खेलहरू
एन्ड्रोइडका लागि चार उत्कृष्ट डु boat्गा खेलहरू। यस एन्ड्रोइडमा हामी फेला पार्न सक्ने उत्कृष्ट डु boat्गा खेलहरूको साथ यस छनौटको बारे अधिक जान्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो अनुवादकहरू
एन्ड्रोइड को लागी चार सर्वश्रेष्ठ भाषा अनुवादक। एन्ड्रोइड फोनका लागि उत्तम अनुवादकहरू उपलब्ध भएको साथ यो छनौट पत्ता लगाउनुहोस्।
Android को लागी चार नि: शुल्क आराम खेलहरु
एन्ड्रोइडका लागि चार सब भन्दा आरामदायक खेलहरू। यस छनौटलाई सबै भन्दा राम्रो आरामदायी खेलहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन हामी एन्ड्रोइड उपकरणहरूको लागि उपलब्ध पाउन सक्छौं।
OTG मार्फत Android मा NTFS हार्ड ड्राइभहरू कसरी माउन्ट गर्ने
व्यावहारिक भिडियो ट्यूटोरियल जसमा म तपाईं लाई ओडीजी कनेक्टिविटी मार्फत प्रयोग गर्न सक्षम हुन एन्ड्रोइड मा NTFS डिस्क माउन्ट कसरी गर्ने देखाउन। हार्ड ड्राइभहरू, PenDrives र मेमोरी कार्ड NTFS मा ढाँचा।
Honor9र Honor 8 Pro Android Oreo मा अपडेट
एन्ड्रोइड ओरियो आधिकारिक रूपमा हनर Pro प्रो र ऑनर both मा आउँदैछ। दुवै थोरै फोनमा अपडेटको बारेमा आविष्कारको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
दुनिया भर बाट एमेच्योर रेडियो सुन्न एक अनुप्रयोग
यहाँ तपाईंसँग एन्ड्रोइडका लागि नि: शुल्क अनुप्रयोग छ जुन विश्वको कुनै पनि ठाउँमाबाट एमेच्योर रेडियो सुन्न मद्दत गर्दछ।
पहिलो Android P डेवलपर पूर्वावलोकन लगभग तयार छ
पहिलो Android P डेवलपर पूर्वावलोकन लगभग समाप्त भएको छ। अपरेटिंग प्रणालीको नयाँ संस्करणको पहिलो पूर्वावलोकनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
निन्टेन्डो मोबाइलको लागि 'मारियो कार्ट टूर' विकास गर्दैछ
निन्टेन्डोले घोषणा गरेको छ कि यो मारियो कार्ट टूर विकास गर्दैछ, यसको लोकप्रिय रेसिcing खेलको मोबाइल संस्करण
वनप्लस T टी Android .5.० ओरेओमा अपडेट गरिएको छ
OnePlus 5T Android .० Oreo मा अपडेट हुन सुरू गर्दछ। अपडेटको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन चिनियाँ ब्रान्डको उपकरणमा पहिल्यै आउन थाल्यो।
[APK] नयाँ पिक्सेल लन्चर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन बिना ROOT (एन्ड्रोइड .5.0.० वा उच्च)
नयाँ पिक्सल लन्चरको नयाँ मोड ताकि तपाईं यसलाई जडान टर्मिनल बिना नै आफ्नो Android .5.0.० वा उच्च मा स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कसरी व्याख्या गर्छौं
Xiaomi Mi A1 मा Android Oreo मा अद्यावधिक पछि समस्याहरू हुन जारी छ
एन्ड्रोइड Oreo को साथ Xiaomi Mi A1 को समस्याहरू अझै अवस्थित छन्। अपडेटको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् र धेरै मुद्दाहरू प्रयोगकर्ताहरूले अनुभव गरिरहेका छन्।
Android Oreo मा अज्ञात स्रोतहरू कहाँ छन् र एन्ड्रोइडमा कसरी सुरक्षित अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्ने
ट्यूटोरियल जहाँ म तपाईंलाई अज्ञात मूल एन्ड्रोइड Oreo मा छन् भनेर देखाउँछु र म तपाईंलाई सुरक्षित रूपमा अनुप्रयोगहरू कसरी स्थापना गर्ने भनेर पनि सिकाउँछु
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो जाडो खेल खेलहरू
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो जाडो खेल खेलहरू। तपाइँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ कि सबै भन्दा राम्रो जाडो खेल खेल को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू जाँच गर्न को लागी कोही मेरो वाईफाई संग जोडे
एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू जाँच गर्न को लागी कोही मेरो वाईफाई संग जोडे। यी अनुप्रयोगहरू पत्ता लगाउँनुहोस् जसको साथ जाँच गर्नका लागि यदि कसैले तपाईंको WiFi नेटवर्कमा बिना अनुमति जडान गर्दछ।
गुगल नक्शा 9.70 .XNUMX० बेटाका सबै खबरहरू पत्ता लगाउनुहोस्
गुगल नक्शामा पुग्ने समाचारहरू पत्ता लगायो। नयाँ अनुप्रयोगहरू लोकप्रिय अनुप्रयोगमा आउने बारे अधिक जान्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि शाजाममा उत्तम विकल्पहरू
एन्ड्रोइडका लागि शाजाममा पाँच उत्तम विकल्पहरू। अनुप्रयोगहरूको साथ यो छनौट पत्ता लगाउनुहोस् जुन एन्ड्रोइड उपकरणहरूमा शाजमलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा उत्तम बोर्ड खेलहरू
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा उत्तम बोर्ड खेलहरू। यस छनौटलाई सबै भन्दा राम्रो बोर्ड गेमहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन हामी अब एन्ड्रोइड उपकरणहरूमा फेला पार्न सक्छौं।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो कार्यालय अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो कार्यालय अनुप्रयोगहरू। एन्ड्रोइडको लागि उपलब्ध सबै भन्दा राम्रो अफिस सूट अनुप्रयोगहरूको छनौट गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा उत्तम फाइल प्रबन्धकहरू
एन्ड्रोइडका लागि पाँच उत्तम फाईल प्रबन्धकहरू। एन्ड्रोइड उपकरणहरूको लागि उपलब्ध उत्तम फाइल प्रबन्धकहरूको साथ यो चयन पत्ता लगाउनुहोस्।
मध्य-दायरा फोन खरीद गर्नका कारणहरू
मध्य-दायरा फोन खरीद गर्नका लागि reasons कारणहरू मुख्य कारणहरूको बारे बढि फेला पार्नुहोस् किन मिड-रेंज फोन खरीद गर्न सुझाव दिइन्छ।
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो भर्चुअल रियलिटी खेलहरू
एन्ड्रोइडका लागि चार उत्तम भर्चुअल रियलिटी गेमहरू। यस प्रकारको सर्वश्रेष्ठ खेलहरू जुन हाल एन्ड्रोइडमा उपलब्ध छन् यसको साथ यो छनौट पत्ता लगाउनुहोस्।
Android Wear २.ear सँग अपठित सूचनाहरूको लागि काउन्टर हुनेछ
एन्ड्रोइड वेयर २.। को नयाँ सुविधाहरू प्रकट भयो। नयाँ हेर्ने अपडेटले ल्याउने समाचारको बारेमा अधिक खोज्नुहोस्।
कसरी तपाईंको प्रेमिका, साथीहरू र परिचितहरूको फेसबुक ह्याक गर्ने। सावधान हुनुहोस् कि फेसबुक हैक गर्न र तपाईको पासवर्ड प्राप्त गर्न सजिलो छ!
साधारण भिडियो ट्यूटोरियल जहाँ म व्याख्या गर्छु कि कसरी फेसबुक ह्याक गर्ने वा कसरी पासवर्डहरू प्राप्त गर्ने बारे साथीहरू, परिचितहरू र परिवारबाट फेसबुक पहुँच गर्न।
ग्यालक्सी S8 बीटा कार्यक्रम अन्त्य हुन्छ
सामसुले ग्यालक्सी S8 को लागि एन्ड्रोइड Oreo बीटा कार्यक्रम समाप्त गर्दछ। बीटा कार्यक्रमको अन्त्य र फोन अद्यावधिक हुने मिति बारे थप जानकारी पाउनुहोस्।
शाओमी मी ए 1 (SKINS) को लागि विषयवस्तुहरू डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्।
व्यावहारिक भिडियो ट्यूटोरियल जसमा म शाओमी एमआई ए १, टर्मिनल जसले हामीलाई एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको भ्रम प्रदान गर्दै छ।
गुगल फाईलहरू गो अपडेट गरिएको छ र तीन नयाँ सुविधाहरू प्रस्तुत गर्दछ
गुगल फाईल गो नयाँ सुविधाहरूको साथ अद्यावधिक भयो। नयाँ सुविधाहरूको बारे अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् जुन अनुप्रयोगले हामीलाई यसको अपडेटमा ल्याउँछ।
Android Oreo आधिकारिक रूपमा मोटो X4 मा आइपुग्छ
मोटो X4 ले आधिकारिक रूपमा Android Oreo प्राप्त गर्न सुरू गर्दछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा अब उपलब्ध अपडेट बारे थप जानकारी लिनुहोस्।
नोकिया ले एन्ड्रोइड .8.१ ओरेओको बिटा प्राप्त गर्दछ
एन्ड्रोइड .8.1.१ ओरियो नोकिया for को लागि बीटा फारममा आइपुगेको छ। नोकियाको उच्च-एन्ड फोनका लागि उपलब्ध अपडेटको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
गुगल क्रोम अपडेट र अन्य समाचार बीचमा विज्ञापनको ध्वनि रोक्दछ
गुगल क्रोम अपडेट र विज्ञापनको ध्वनि रोक्दछ। ब्राउजरले हामीलाई यसको नयाँ अपडेटमा छोड्दछ भन्ने खबरको बारेमा बढि खोज्नुहोस्।
Ulefone Power3अधिकतममा विशाल १A,००० एमएएच ब्याट्री हुनेछ
Ulefone ले यो पहिले नै पावर3को उत्तराधिकारीमा काम गरिरहेको छ भनेर पुष्टि गरेको छ ... यो Ulefone पावर Max अधिकतम, एक शक्तिशाली टर्मिनल हो कि एक ठूलो १,3,००० एमएएच ब्याट्रीको साथ आउँछ जुन हाम्रा सबै मागहरूको सामना गर्न समयको परवाह नगरी सहन सक्दछ। हामी तपाईंलाई विस्तार!
ह्यारी पॉटर: Hogwarts रहस्य अब Google Play र APK मा उपलब्ध छ
ह्यारी पॉटर: Hogwarts रहस्य अब Google Play र APK मा उपलब्ध छ। प्रख्यात गाथामा आधारित नयाँ एन्ड्रोइड खेलको सुरुवातको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
इला एक्स: केवल e० यूरोको एन्ड्रोइडको गहन समीक्षा
इला X को साथ दश दिन प्रयोग पछि, एन्ड्रोइड टर्मिनल को गहिरो समीक्षा यहाँ छ कि आईफोन X को क्लोन हुन चाहान्छ र यसको लागत 80० यूरो मात्र पर्छ।